Uganda oo walaac ka muujineysa Al Shabaab Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Uganda oo walaac ka muujineysa Al Shabaab Dowladda Uganda ayaa waxa ay ka digeysaa weeraro ay dalkeeda ka gaystaan Xarakada Al Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya.
Xasan Kasingye oo ah Sarkaal ka tirsan ciidamada Uganda ayaa ka sheegay magaalada Kampala in dadka reer Uganda looga baahan yahay inay feejignaan dheeri ah muujiyaan sababo uu ku sheegay inay suurto gal tahay in rag ka tirsan Xarakadda Al-Shabab ay weeraro ka geystaan wadankaasi meelo ka mid ah.
Sarkaalkaani waxaa uu tilmaamay in xog ay heleen ay muujinayso in Shababku maleegayaan weeraro la mid ah weeraro ay horey magaalada Kampala uga geysteen waxaana uu intaa ku daray inay suurto gal tahay in meelaha dadku iskugu yimaado lagu xiro waxyaabo qaraxa.
Waa inaad sameysaan taxadar dheeraad ah oo aad cid walba ka digtoonaataan waayo waxaa horey halkaan qaraxyo uga geystay kuwa dalkaan u dhashay ayuu yiri sarkaalkaasi u hadlay booliska Uganda sidoo kalena agaasime ka ah laanta booliska adduunka ee Interpol ku leeyahay wadanka Uganda.
Dawlada oo ka mid ah wadamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya dhawr waxaa u goodiyay Xarakadda Al-Shabab oo Soomaaliya ka dagaalanta.